Usarasikirwa nezvose zviripo zvekuona muNew York | Absolut Kufamba
Zvokuona muNew York: nzvimbo dzakanakisa muguta iro risingamborara
Alberto Makumbo | | USA, New York
Kana paine guta rinomiririra Madokero senge hapana rimwe, iri chokwadi New York. Guta rinokwanisa kutenga mazita mazhinji sekugona kwaro kushanyira zvinokwezva ndeimwe yenzvimbo dzinogutsa munhu wese, chiri chirevo chisingadzivisike chemasikiriti, mifananidzo uye nharaunda dzevanhu. Iwe unoda here kuziva zvese zviripo chii chekuona muNew York?
5 Bhiriji reBrooklyn
8 Rockefeller nzvimbo
Epicenter yeNew York, uye kunyanya dunhu re Manhattan, Times Square ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza pasi rese. Tungamira kumatanho eTKTS uye utore akanakisa mafoto eiyo sango rekongiri umo vanhu, vanowanzoita machena matekisi, zvitoro, mimhanzi poster uye skyscrapers inopindirana. Kana iwe zvakare uine nguva, huya uone zvimwe zve dzichangoburwa Broadway mimhanzi kana pinda yepasi rose M & Ms chitoro. Zvese izvi, tisingatauri a Makore Matsva Evha ngano pakati pemvura inoyerera nemabhora mahombe anogamuchira gore idzva.
Imwe yezvivakwa zvakawanda paNew York's Fifth Avenue
Kana paine mugwagwa unozivikanwa pasi rese, ndiwo Fifth Avenue. Tsinga huru yeNew York izere remigwagwa, zvimiro uye zvivakwa zveArt Deco uko mamwe e zvitoro zvakanakisa pasirese. Uye zvakare, ino zvakare inzvimbo yakakwana kubva kwaunoshanyira mamiziyamu sezvakakurudzirwa iyo Metropolitan Museum yeArt (kana MoMA) kana iyo Guggenheim. Zvese izvi, tisingatauri nezvekuswedera kweiyo. . .
Inofungidzirwa se chivakwa chakareba kwazvo pasi rose kubva muna 1931 kusvika muna 1971, iyo Empire State Kuvaka yatove icon yeNew York uye nehukuru hwayo. Inofungidzirwa se National Historic Landmark muna 1983, skyscraper ine urefu hwakareba hwe443 metres uye inosvika ku102 pakati payo yakavanda maonero maviri ane mukurumbira: imwe pauriri makumi masere nemasere uye imwe pane yepasi pekupedzisira, kuve ichi chiitiko chemafirimu akakurumbira saIwe neni kana Chimwe chinhu chekurangarira, naTom Hanks naMeg Ryan.
Isu tese tinorangarira izvo zvakashata 11 September we2001 umo kurwisa kwe shongwe mbiri vakarova moyo mukurusa wezvemari weNew York uye nawo, nenyika yese. Zero yepasi iyo mukati memakore anotevera akafunga sarudzo dzakasiyana kusvika pakuvakwa muna 2014 we One World Trade Center, skyscraper nyowani iyo ine 104 pasi inoonekwa se kureba chivakwa kumadokero kwenyika. Chikonzero chakanakisa chekurasika chinokwira kune chinonakidza Maonero One World Observatory kana kushanyira 11/XNUMX Chirangaridzo neMuseum uye vanopfuura zviuru zvitatu vakaurayiwa mukurwiswa uku.
Maonero eBrooklyn Bridge inozivikanwa
Kana iwe wakamboona mafirimu saWoody Allen's Annie Hall, iwe uchayeuka ndeipi yeimwe iwo mabhiriji anoonekera kwazvo pasi rese. Zvimwe chete, izvo inobatana neManhattan neBrooklyn kwemakiromita maviri, yakavhurwa muna 1883 ichiva panguva iyo zambuko rakakura kusimiswa pasi rose. Yakanakira kutora mamwe akanakisa maonero eguta, kunyanya pakuvira kwezuva, iyo Brooklyn Bridge inomutsa runako rweNew York City iyo inokukoka iwe kuti ufambe uye unzwe samambo wenyika.
Yakagamuchirwa se chipo kubva kuFrance kunongedza zana ramakore rekusainwa kweDeclaration of Independence, Chiumbwa cheRusununguko chakasvika pamuromo weRwizi Hudson muna 1886 kuva chimwe chezviratidzo zvikuru zveUnited States nepasi rose. Yakanaka ye kushanya pamwe chete neEllis Island kana Staten Island (kubva pano iwe unogona kuwana iyo yakanakisa mifananidzo), iyo Statue yeRusununguko ine maonero ekuti iwe unofanirwa kunyorera matikiti ako pamberi, nekuti ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kukumbirwa muNew York.
Kana tichifunga nezve "mapaki epasi", yekutanga inouya mupfungwa hapana mubvunzo kuti Central Park, iyo huru mapapu yeNew York City iri mukati memwoyo weManhattan. Yakavhurwa muna 1857 uye inoumbwa neanopfuura matatu mativi emakiromita, Central Park inokwana mhando dzese dzezviitiko: kubva pamigwagwa yebhasikoro kusvika kumatasva emboro, kuburikidza nezvakawanda zviitiko zvetsika, yemitambo yemasikati muzhizha uye kunyange misangano. Pasina kupokana, mumwe wevakuru anofanirwa kuona muNew York panguva yekushanya kwako kuBig Apple.
Inowanikwa muMidtown Manhattan, Rockefeller Center iri seti inosvika 19 yezvivakwa zvekutengesa kwaunowana zvimwe zvezvitoro zvepamusoro-soro muguta rese. Yakavakwa muna 1939 uye yakasarudzika National Historic Landmark muna 1987, iyo complex inosanganisirawo infarct maonero, zvivakwa zvevakakurumbira Radio City Music Horo kana, kunyanya, nzvimbo yeKisimusi iri muchimiro che Muti weKisimusi uye chando skating rink yakatoshandurwa kuita echando echinyakare muguta.
Kuona kweMadison Square Bindu rimwe zuva rezviitiko zvemitambo
Mitambo ye baseball, konzati yengano kana kunyange mitambo yetsiva. Yese mutambo uye yetsika chiitiko chingafungidzirwa chinoitika pano, mune izvi zvinonakidza Nhandare yakashandurwa ikaenda kumusha kune Knicks kana New York Ranger hockey timu umo maartist ane mukurumbira munhoroondo akambotambawo pane imwe nguva. Tarisa purogiramu uye uzvirasire iwe mumhirizhonga uye kushingairira kwezvimire.
Kuonekwa makore apfuura senzvimbo ine njodzi, Brooklyn nhasi musha kune mamwe ma New York Guta Rinonyanya Kufadza Tsika Dzemaitiro. Yambuka Bridge rakakurumbira reBrooklyn uye uzvirasire mumigwagwa ine hunyanzvi hwemaguta, nzvimbo yeDumbo yakanaka yekutora mifananidzo kana kurasika muWilliamsburg, hipster nharaunda uko pasina kushomeka kwemabhawa uye zvimwe zvitoro muguta. Nharaunda yepasi rose sevashoma vamwe kushanya kwavo kunogara kuri nani kana iwe ukapedzisira nepikiniki muProspect Park yakakurumbira kana kushanya kuBotanical Garden.
Pane nzvimbo dzakawanda dzekuona muNew York. Vazhinji, kutaura zvazviri. Nekudaro, kazhinji nguva hunyengeri ndeyekuti uzvibvumire kuenda uye usavimbe zvakanyanya panzira yekukurumidza. Famba nemigwagwa yayo, idya imbwa inopisa, tasva subway yayo, uzvirasire iwe mumaonero uye unzwe runako rwekuva pakati penyika. Mune iro reguta risingarare.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzekuona muNew York iwe dzaunokurudzira? Ungada here kuziva ese zvinhu zvemahara zvaunogona kuita muNew York?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zvokuona muNew York: nzvimbo dzakanakisa muguta iro risingamborara